မေမေက စောက်ရမ်းလှတယ်၊ ဖေဖေက စောက်ရမ်းလန်းတယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » မေမေက စောက်ရမ်းလှတယ်၊ ဖေဖေက စောက်ရမ်းလန်းတယ်
မေမေက စောက်ရမ်းလှတယ်၊ ဖေဖေက စောက်ရမ်းလန်းတယ်
Posted by intro on Jan 28, 2011 in Buddhism, Creative Writing, Drama, Essays.., News, Science & Religion | 13 comments
(အရေးအသားရိုင်းပျသွားရင် ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါဗျာ… စကားပြောနေရင်း ခေါင်းထဲက တွေးမိတဲ့အရာလေးကို ထုတ်ရေးထားတာပါ၊ အားလုံးရဲ့အမြင်ကိုလဲ သိချင်ပါတယ်)
မင်းပြောတာ ငါလက်ခံတယ်။ ခုခတ်က “စောက်” ဆိုတဲ့ စကားဆိုတဲ့ ဝေါဟာရက မရိုင်းတော့ပါဘူး။ ငါတို့ လူငယ်တွေရဲ့သင်္ကေတပဲ………
အပေါ်ကရေးထားတဲ့(မင်းပြောတာ ငါလက်ခံတယ်။ ခုခတ်က “စောက်” ဆိုတဲ့ စကားဆိုတဲ့ ဝေါဟာရက မရိုင်းတော့ပါဘူး။ ငါတို့ လူငယ်တွေရဲ့သင်္ကေတပဲ…) ဆိုတာ ကျွန်တော်မရှိခင် ကျွန်တော့ခလေးတွေဝင်ရေးသွားတာပါ တောင်းပန်ပါတယ် တွေးကြည့်တော့လဲ ကိုယ်တိုင်တောင်တခါတလေ ဒါလေးကိုထည့်ပြောမိပါရဲ့……
တချို့နေရာမှာ ” စောက် ” ထက် ” သောက် “ဆိုတဲ့ စကားလေးသုံးရင် ပိုပြီးချစ်စရာကောင်းမယ်ထင်တယ်… တွေးမိတာကိုပြောတာနော့..
ဘယ်လို နားထောင်ကြည့်လို့ နားထဲ ဖြောင့်အောင် မ၀င်သွားတဲ့ စကားလုံးပါ
စာရေးဆရာတွေ မလွှဲသာလို့ ရေးရင်တောင်မှေxာက် လို့ ရေးပါတယ် .. ဒါကြောင့် မသုံးကြပါနဲ့လား.
ေ-ာက် ကလေးတွေ စနေထောင့်မှာ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ကြ စမူဆာစားပြီးေ-ာက် တင်းပြောနေကြတယ်
လူငယ်ချင်းသုံးတာ ပြသာမရှိပေမဲ့ လူကြီးတွေနဲ့ စကားပြောရင်တော့ မသုံးသင်ဘူးထင်ပါတယ် ။
စာရေးမပေါက် စောက်ရေးမပါ အခြောက်လေးခမျာ မှောက်ပေးကာ ဖောက်ပေးပါဆိုလို့ ထောက်ကျွေးတာ ကြောက်ချေးပါသွားတယ်…။
ဒီစကားလုံးက ဘယ်လိုပဲ အပြုသဘော ဆောင်ဆောင် ကလေးတွေကိုတော့ ဒါမျိုးသုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အတွေး မ၀င်စေချင်ပါဘူး… ကိုယ်.ကလေးကသာ မေမေကေ-ာက်ရမ်းလန်းတယ်ပြောလာရင်တော့ ၊ ပထမတစ်ကြိမ်တော့ နားလည်အောင် ရှင်းပြမယ်။ နောက်တခါ ဆိုရင်တော့ ကျောပြင်ကို ဗြောတင်ရပါလိမ့်မယ်…:D
ရန်ကုန်ကလူတွေရဲ ပါးစပ်ဖျားမှာပဲ ဒီစကားလုံးရှိတာပါ နယ်မှာတောရှိဘူ အရမ်းရိုင်တယ်ထင်ကြတာ
စကားရဲ့ အရင်းအမြစ် ဘယ်ကနေ ရွှေ့လျှောသက်ဆင်းလာတယ်ဆိုတာ
သိရင်တော့ ဒီစကားလုံးက မသုံးသင့်တဲ့စကားပါ။
“စောက်” ဆိုတာဘယ်ပစ္စည်းကို ကိုယ်စားပြု သုံးနှုံး တယ်ဆိုတာ သိကြပါတယ်။
အခြားစကားလုံးများနှင့် တွဲသုံးပေမဲ့ ယဉ်ကျေးမသွားပါဘူး။
ကိုယ့်ဓလေ့ ကိုယ့်စာကို မြတ်နိုးသူတွေ အားမပေးသင့် မသုံးနှုန်းသင့်ပါဘူး။
ခလေး မို့လို့ သုံးတာ ဆိုပြီးလည်း ခွင့်မလွှတ်သင့်ပါဘူး။
သွန်သင် ပြသပေးကြဖို့ လိုပါတယ်။
အသက်အရွယ်နဲ့ အခြေအနေအရ ဘန်းစကားတွေကို လူငယ်ဘဝမှာ အများဆုံး သုံးဖြစ်ကြပါတယ်။ နောက် အသက်တွေ ကြီးလာတော့လည်း ဒီလို သုံးဖို့ မဖြစ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဆိုတော့ မသုံးဖြစ်ကြတော့ပါ။ ဒါမျိုးသုံးကြတာကတော့ ခေတ်တိုင်းမှာ ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ အောက်ပိုင်း ဒေသက လူတွေက အဆဲလေးနဲ့ စကားပြောတာ ပိုများသလိုပဲ။ ကျနော်တို့ မော်လမြိုင်သားတွေဆိုရင် စကားတခွန်း ပြောတာတောင် အဆဲလေးနဲ့ ပြောလေ့ ရှိတတ်ကြတယ်။ အဲလို ပြောလို့ မဖြစ်တဲ့ အခြေအနေ ရောက်လာတော့လည်း အလိုလို မပြောဖြစ်တော့ပါဘူး။
ဟိုးအရင်.. ကိုပေါက်တို့၊ မဆူးတို့ မန်းထားတဲ့ Comments တွေ ဘယ်ရောက်သွားပါလိမ့်…??
ဖေဖေတို့မေမေတို့ပြီးရင် ဘိုးဘိုး ဘွားဘွားတို့ ဒို့ကိုးကွယ်တဲ့ရွာဦးကျောင်းကဆရာတော်တို့ နောက်ပြီးနောက်ပြီး …. အဲလိုသာဆိုရင်
ကျွန်တော်ကလည်း မနေနိုင်မထိုင်နိုင် စောက်ရေးမပါတာတွေဝင်ပြောမိပြန်ပြီ